Kosi pa "Copyright" iyo inogona kukufadza semunyori | Zvazvino Zvinyorwa
Pamusoro pekuverenga, chikamu chenguva yangu yemahara ini ndinotsvaga kutsvaga emahara makosi anokwanisa kupa chimwe chinhu kune izvo zvandakadzidza kana kuti ndatoziva nekuda kwemamwe makosi. Ndichitsvaga mazuva akapfuura, ini ndakawana imwe yandaifunga kuti inogona kufarira kupfuura mumwe wenyu anogara achipinda muno. Iyo kosi kubva kuMiríada X yemahara online kosi chikuva.
Iyo kosi yandiri kutaura nezvayo ine musoro wacho "Copyright". Tevere, ini ndinoisa rumwe ruzivo nezvazvo uye chinongedzo kana iwe uchifarira kuzviita.
1 Tsananguro yekosi uye rumwe ruzivo
1.1 Kosi data
1.2 Course ma module
Tsananguro yekosi uye rumwe ruzivo
Iyo copyright kosi inogadzira chikumbiro icho chinotanga nekuburitswa kwezvimwe zvakakosha pamavambo, chimiro chepamutemo, mazano uye nzira dzekudzivirira, uyezve zvoongorora kodzero dzakapihwa nevanyori vemabasa, asi nharaundawo zvavo nekuda kwekusununguka kwavo. inoshandisa, mumamiriro ezvinhu enharaunda yeruzivo.
Kutanga musi: 10 yeOctober (inotanga mangwana).
Nguva yekosi: Mavhiki e4 (anenge maawa makumi maviri ekudzidza).
Inodzidziswa kubva ku Cooperative Yunivhesiti yeColombia.
Chikamu: 4/5 *
Mudzidzisi: Piedad Lucía Barreto Granada
Course ma module
Mune ino kosi iwe unogona kuwana akazara mana ma module pachinhu chekodzero, uye ndiwo anotevera:
0 Module: Nhanganyaya kumusoro wenyaya.
1 module. Ziva izvo zvakakosha zvekurayira.
2 module. Inokodzera kupatsanurwa kwekodzero dzetsika nehupfumi.
3 module. Shandisa mitemo inobvumira kushandiswa kwechokwadi kwemabasa kukosheswa.
Iwe unogona kutora kosi iyi nekuda kwemavhidhiyo akaiswa kubva kuCooperative University yeColombia. Iwe zvakare uchave neforamu yezviratidziro, kusahadzika uye mibvunzo mauri kwaunogona kubvunza nekupa chimwe chinhu kune vese vari vaviri kosi mudzidzisi uye vamwe vaunoshanda navo vakanyoresa icho.
Kana iwe uchifarira uye uchida kuwana uye kutanga mangwana, heino iyo link izvo zvinonanga kunzira iyi.
Ndinovimba iwe unowana chimwe chinhu chinonakidza uye chinogadzirisa chero kusahadzika kwaungave uine pamusoro penyaya iyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Kosi ye "Copyright" iyo inogona kukufadza semunyori